ဒီအဖိုးကို တွေ့ရင် ခွေလည်းဝယ် ထီလည်းထိုးပြီး အားပေးကြပါဦးနော် – Maharmedianews
ဒီနေ့ရင်ထဲထိသောပုံလေး တစ်ပုံ 😢
အဲ့ဒီ အဖိုးက်ို ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရား ရှေ့မှာတွေ့ရင် သူ့ဆီက အခွေလေးတွေရယ် ထီလေးတွေရယ် ဝယ်ပြီးကုသိုလ်ယူလိုက်ပါနော် 😢
အဖိုးမှာ မိသားစုလည်းမရှိဘူး ။ဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူး ။သူတစ်ယောက်တည်း ကြုံသလိုနေနေရတာပါ…
ဟိုးအရင်က နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ထောင်ထဲမှာအရိုက်အနှက်ခံရတယ်ကြားတယ်။
အသက်လည်းကြီးလာတော့ ခါးကအရမ်းကုန်းနေတာ ….
ခါးကလည်းအရမ်းကုန်းပြီး နေပူထဲမှာ အဆင်ပြေသလို အခွေလေးတွေ ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းနေရတာ 😔
သူ့ခမျာ အိပ်ချင်တာတောင် ကြုံသလိုငိုက်နေရှာတယ်…
ထီ ၁စောင် ၁ထောင်နဲ့ဝယ်ပြီး ၁ထောင်နဲ့ ပြန်ရောင်းတော့ အဘမမြတ်ပဲနဲ့ဘာလို့လဲလို့မေးတော့….
ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဒီလိုလေးနေရတာ တကယ်ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်မိတယ်….
ကိုယ်လည်း တက်နိုင်သလောက် ကူညီလှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်….
ပုစွန်တောင်ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရားရှေ့ရောက်ရင် အဘဦးသိန်းတန် ကို လှူပေးဖို့ကူညီကြပါနော်…..။
ဒီနရေ့ငျထဲထိသောပုံလေး တဈပုံ 😢
အဲ့ဒီ အဖိုးကျို ရှဘေုနျးပှငျ့ဘုရား ရှမှေ့ာတှရေ့ငျ သူ့ဆီက အခှလေေးတှရေယျ ထီလေးတှရေယျ ဝယျပွီးကုသိုလျယူလိုကျပါနျော 😢
အဖိုးမှာ မိသားစုလညျးမရှိဘူး ။ဆှမြေိုးလညျးမရှိဘူး ။သူတဈယောကျတညျး ကွုံသလိုနနေရေတာပါ…
ဟိုးအရငျက နိုငျငံရေးလုပျတယျ ထောငျထဲမှာအရိုကျအနှကျခံရတယျကွားတယျ။
အသကျလညျးကွီးလာတော့ ခါးကအရမျးကုနျးနတော ….
ခါးကလညျးအရမျးကုနျးပွီး နပေူထဲမှာ အဆငျပွသေလို အခှလေေးတှေ ပစ်စညျးလေးတှရေောငျးနရေတာ 😔
သူ့ခမြာ အိပျခငျြတာတောငျ ကွုံသလိုငိုကျနရှောတယျ…
ထီ ၁စောငျ ၁ထောငျနဲ့ဝယျပွီး ၁ထောငျနဲ့ ပွနျရောငျးတော့ အဘမမွတျပဲနဲ့ဘာလို့လဲလို့မေးတော့….
ဒီအသကျအရှယျမှာ ဒီလိုလေးနရေတာ တကယျရငျထဲမကောငျးဖွဈမိတယျ….
ကိုယျလညျး တကျနိုငျသလောကျ ကူညီလှူဒါနျးဖွဈပါတယျ….
ပုစှနျတောငျရှဘေုနျးပှငျ့ဘုရားရှရေ့ောကျရငျ အဘဦးသိနျးတနျ ကို လှူပေးဖို့ကူညီကွပါနျော…..။
← ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲ လွမ်းတသတသဖြစ်နေဆဲ သဘာဝမင်းသား ဒွေး အကြောင်း
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသံချဲ့စက်သံတွေနဲ့ ဆူညံနေပါသလား. . .တိုင်လိုက်ပါ. ..ဒီဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူလို့ရပါတယ် →